Luhlaza-Ningbo Futur Technology Co., Ltd
IZINTO & NEZINZUZO
.Sisebenzisa imathiriyeli evuselelekayo ngokukhawuleza egcinakeleyo kwiimveliso zethu ezipakishwayo ezinokuphinda zisetyenziswe okanye zenziwe umgquba worhwebo.
.Ngokuhlalutya kunye nokuqonda impembelelo yokusingqongileyo kuwo onke amanqanaba kumjikelo wobomi beemveliso zethu, siyakwazi ukuvelisa ezona zisombululo zokupakisha ukutya okuzinzileyo kubathengi bethu, ozimisele ukugcina nokukhusela okusingqongileyo kwizizukulwana zangoku nezexesha elizayo kunye nathi. .
SIZIBOPHEZELE UPHUHLISO NOKUPHUHLISA IINGXELO EZIZINZIYO UKUBA UBOMI OBLUHLAZA.
.I-CPLA yethu yokusika yenzelwe ukumila ngokwahlukileyo, isebenzisa izinto ezincinci eziyenza intengiso kunye nokhuphiswano lwengqondo.Yenziwe kwizityalo ezivuselelekayo, hayi i-oyile.
.I-BPI kunye ne-Din Certico eqinisekisiweyo i-compostable kwindawo yokuthengisa okanye kwimizi-mveliso.
.Zombini ubungakanani obupheleleyo kunye ne-med-weight CPLA cutlery ranges ziyafumaneka, ukuhlangabezana nezicelo ezahlukeneyo kunye nemfuno yomthengi.
.I-Black & white cutlery enemibala ikhona, imibala elungiselelweyo kunye nephakheji nazo ziyafumaneka.
Indebe yephepha kunye nesitya
.Yenziwe kwizityalo ezivuselelekayo, hayi ioli.Isiqinisekiso se-BPI kunye ne-Din Certico esivundisiweyo kwindawo yorhwebo okanye yoshishino.
.Uluhlu lwethu lwekomityi yephepha lubandakanya ubukhulu obupheleleyo ukusuka kwi-4oz ukuya kwi-24oz, udonga olulodwa kunye nodonga oluphindwe kabini iinketho ezimbini ezikhoyo.Tshatisa kunye neziciko zethu ze-CPLA ezivundisiweyo.
.Uluhlu lwethu lwesitya sesobho sephepha lubandakanya ubungakanani obupheleleyo ukusuka kwi-6oz ukuya kwi-32oz, umdlalo kunye neziciko zethu ze-compostable CPLA okanye izivalo zephepha.
.Uluhlu lwethu olubanzi lwesitya sephepha lubandakanya ubukhulu obupheleleyo ukusuka kwi-8oz ukuya kwi-40oz, umdlalo kunye nezivalo zethu ze-compostable ze-CPLA, ii-lids zephepha kunye ne-PET lids ezinokuphinda zisetyenziswe.
.Ushicilelo olulungiselelweyo kunye nephakheji nazo ziyafumaneka.
Izikhongozeli zokutya zephepha
.Uluhlu lwethu lokupakisha lwephepha lokuhamba lubandakanya iimilo ezininzi ukusuka kumjikelo ukuya kwisikwere, kunye neesayizi ezininzi ukusuka kwincinci ukuya enkulu, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
Ukupakishwa okuphinda kusetyenziswe kunye neCompostable
.Olu luhlu luphuhliswa kwinjongo yokunciphisa impembelelo yokupakisha kokusingqongileyo, eyenziwe kwizinto ezivuselelekayo, ezinokuphinda zisebenziseke kwaye zivuthwe.
.Uluhlu lwethu lokupakisha oluphinda lusetyenziswe kunye ne-compostable lubonelela ngesisombululo sokupakisha esipheleleyo sokutya, esibandakanya ubukhulu obuninzi bezinto zokuhamba, izitya kunye neekomityi.